A mara ọkwa Xiaomi na Snapdragon 730 otu n'ime ndị isi ya | Gam akporosis
Bọchị ole na ole gara aga, Redmi India kwupụtara ọkwa ọhụrụ abụọ: Redmi Y3 na Redmi 7. Behind a, Xiaomi India CEO ekpughere na ekwentị dị ike karị ga-ada n'ahịa n'oge na-adịghị anya, na ọ mere ya awa ole na ole gara aga.
Ihe na-akpali akpali bụ na o kpughere na ekwentị ga-kwadoro site na Qualcomm si ọhụrụ Snapdragon usoro: Snapdragon 730 ma ọ bụ Snapdragon 730G.
Na tweet nke e biputere n'oge na-adịbeghị anya, onye isi ụlọ ọrụ Xiaomi India Manu Kumar Jain kesara foto ya na ndị isi abụọ Qualcomm India. O kwuru banyere Mmekọrịta n'etiti ụlọ ọrụ abụọ ahụ wee kwupụta maka mbata nke ekwentị Xiaomi.
Nnukwu nzukọ Rajen @rajen_vagadia & Kedar si #Qualcomm.@Xiaomi & @Qualcomm na-arụkọ ọrụ mgbe niile iji weta ihe ọhụụ na nke kachasị mma!
Na-agbasa ozi ọma: Ọhụrụ #Xiaomi ekwentị kacha ọhụrụ #Ngwa snapdragon 7_ _ (ekwuputara na izu abụọ gara aga) na-abịa India oge adịghị anya!
Amụma ọ bụla? ? pic.twitter.com/TnrnTOr4PI
Naanị ozi o kpughere banyere ngwaọrụ ahụ bụ na ọ ga-abịa na "Snapdragon 7_ _ kachasị ọhụrụ (mara ọkwa naanị izu 2 gara aga)". Snapdragon 730 na Snapdragon 730G bụ Snapdragon 700 chipsets nke Qualcomm wepụtara n’ọnwa a, yabụ enweghị obi abụọ na ọ bụ otu n’ime ha abụọ. O sina dị, Anyị kwenyere na Snapdragon 730 ga-abụ onye ụlọ ọrụ ahụ ga-ahọrọ.
Naanị otu izu gara aga, isi ụdịdị nke a Redmi ekwentị leaked. Ọnwụ ahụ kpughere na Snapdragon 730 processor kwadoro ngwaọrụ ahụ, nwere batrị 4,000 mAh na ntọala kamera atọ (48 MP + 8 MP + 13 MP). Nke a yikarịrị ka otu ngwaọrụ ahụ na-aga India, mana Enwere ike ịmalite nke mbụ na China.
N'agbanyeghị leaks, anyị enwebeghị ozi banyere aha ekwentị, mana anyị kwenyesiri ike na nke ahụ ga-amalite na India dị ka ekwentị Mi ma ọ bụghị dị ka ekwentị Redmi. Nke a ka ga-ahụ.
Iji kọwaa ya, ọ nwere ike ịbụ ekwentị Mi A3, nke ga-abata dị ka gam akporo Otu, mana nke a bụ nkọwa karịa ihe ọ bụla. Enweghi ụbọchị ntọhapụ ọ bụla, mana ọ nwere ike ịbịa ọsọ ọsọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Otu n'ime ndị isi ya kwupụtara ọkwa Xiaomi na Snapdragon 730
Emeputara ihe nchoputa mkpisi-aka nke mbu nke uwa maka ogwe aka LCD